Shina : Ny Fiantohana Amin’ny Setroka, Vahaolana Farany Amin’ny Fahalotoan’ny Rivotra iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Avrily 2014 11:01 GMT
Mety handray onitra hatramin'ny 1500 yuan ( manodidina ny 240 dolara Amerikana), arakaraky ny fifanarahana, ireo nandoa saram-piantohana any Beijing raha toa ka niditra hopitaly noho ny fahalotoan'ny rivotra iainana izy. Raha toa ka mihoatra ny 300 ny tondron'ny kalitaon'ny rivotra (AQI), any Beijing, mandritra ny dimy andro misesy – haavo heverina fa mety hitera-doza- dia mety handray 300 yuan ( eo ho eo amin'ny 48 dolara amerikana) ireo mpividy antoka. Mandrefy ireo kasinga mpandoto toy ny singa madinika sy ny diôksidanà solifara ny AQI.
Herinandro vitsivitsy taorian’ny nilazan'ny mpitondra Shinoa fa tanàna telo ihany any Shina no manana kalitaon-drivotra iainana manara-penitra io fanambarana momba ny fifanaraham-piantohana io.
Nasongadin’ny Piraiministra Li Keqiang tamin’ny lahateniny fanokanana ny Kongresy nasionalim-bahoaka, fiantso ny parlemanta Shinoa, tamin’ity taona ity ny halehiben’ny fandotoana ny rivotra iainana izay namakiany ny ady amin’ny fandotoana ny rivotra iainana.
Izao no nosoratan'i Shen Pinglunyuan:
Tsy resy lahatra amin'io hevitra io mihitsy raha i “70s version Xu Wenqiang“ :
Nanoratra i “Nuli Caishi Wangdao 1997″
Toy izao kosa ny hevitr'i “Forever_RickyQ” :